Joe Abercrombie: nna nke saga Iwu izizi | Akwụkwọ ugbu a
John Ortiz | | Akụkọ ndụ
Nkwupụta okwu Joe Abercrombie
Joe Abercrombie bụ onye ode akwụkwọ Britain ruru eru dịka otu n'ime ndị na -esepụta ụdị echiche efu. Kemgbe mmalite nke trilogy ya La Iwu mbụ ruo ugbua ọ kpalitela nnukwu edemede n'akwụkwọ akụkọ ifo. Daalụ Olu mma agha (2006) —onye mpụta mbụ ya - ka ahọpụtara afọ abụọ ka e mesịrị maka nturu ugo John W. Campbell maka onye ode akwụkwọ kacha mma.
A na-amata ụdị ya site na nkọwapụta nke mkpụrụedemede dị mgbagwoju anya na nke a haziri nke ọma, nke na-adaba n'ụzọ zuru oke na eziokwu. Banyere, onye edemede ahụ na -ekwusi ike, sị: “Achọrọ m n'ezie ilekwasị anya n'ihe odide dị ka o kwere mee ma debe ọnọdụ, etiti dị n'okirikiri. Ya mere, owuwu nke ụwa nke m na -achọkarị na -etinyekwu uche n'ime ime ”.
1 Akwụkwọ Joe Abercrombie
1.1 Iwu Mbụ Saga
1.1.1 Olu nke mma agha (2006)
1.1.2 Tupu ha atụdoro gị (2007)
1.1.3 Arụmụka Ikpeazụ nke Ndị Eze (2008)
1.2 Mmegwara kacha mma (2009)
1.3 Ndị dike (2011)
1.4 Afọ Madness Saga
1.4.1 Obere ịkpọasị (2019)
1.4.2 Nsogbu nke udo (2020)
1.4.3 Amamihe nke igwe mmadụ (2021)
2 Banyere onye edemede, Joe Abercrombie
2.1 Ọrụ Joe Abercrombie na -arụ
Akwụkwọ Joe Abercrombie
Saga Iwu Mbụ
Iwu Mbụ bụ usoro nke akwụkwọ akụkọ atọ, nke na -ewere ọnọdụ n'ime ụwa dị egwu. Na akụkọ ndị a onye Briten nwere “echiche efu pụrụ iche”, usoro nke were ya ọtụtụ afọ iji wuo na zụlite. Abercrombie rụrụ ụka na ọ kwesịrị ịgụnye akụkụ ndị bụ isi, dị ka: "... ụlọ elu anwansi, alaeze dị mma na -agaghị ekwe omume, obodo mara mma ...".
Olu mma agha (2006)
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ na -ewebata ụwa anwansi nke onye edemede dere. Nke a ọ dabere na ngosipụta nke agwa ya, nke bụ isi na nke abụọ. Na mgbakwunye na atụmatụ dị egwu, a na -emetụta isiokwu dị iche iche, dị ka agha na esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmekpa ahụ na obi ọjọọ gbara gburugburu Alaeze Gurkhul; niile na -emetụ ọchị ọchị ojii.
Olu mma agha: The ...
Tupu ha kpọgidere ha (2007)
Nkebi nke a na -aga n'ihu akụkọ a kwụsịtụrụ na akụkọ mbụ. N'ime ya kwa ikuku ọjọọ na obi ọjọọ nke ọgụ maka ịgbachitere obodo Dagoska na -adị. Ndị isi akụkọ ya -Glotka, Logen, Bayaz, Ferro, West na Hound-, na ụfọdụ ndị ọhụrụ, na -eme njem ndị dị mkpa ma na -ebu agha siri ike megide ndị ugwu nke Bethod na -edu.
Ikpeazụ arụmụka nke ndị eze (2008)
Ọ bụ akụkụ ikpeazụ nke usoro. N'ime ya ọgụ siri ike na North na -aga n'ihu, ebe Glotka na -akwado maka nhọpụta nke eze ọhụrụ. Ndị na -agụ akụkọ a na -agba mgba mgbe niile ịlanarị na mpaghara ọbara na nke iro. Na nkeji nkeji a a na -enye nsonaazụ ya n'elu a na -ekpughekwa ezi ebumnobi nke ndị na -etinye aka n'ime akụkọ ntolite niile.
Arụmụka ikpeazụ nke ...
Ọbọ kacha mma (2009)
Monza Murcatto - Agwọ nke Talins- Ọ bụ onye ọchụnta ego nke onye ọ bụla kwenyere na ọ nwụọla mgbe a rara ya nye n'agha. Agbanyeghị, ọ laghachi ịbọ ọbọ megide ndị iro asaa, onye ọ na -agaghị emere ebere. Iji mee nke a, gaa n'obodo dị iche iche na Styria (ebe yiri Ịtali mgbe ochie nke juputara na ndị na -ere ahịa na mma agha, na ebe ihe egwu dị).
Abọ ọbọ kacha mma (13/20)
Ndị dike (2011)
N'ime akwụkwọ akụkọ nke ise a, Abercrombie na mgba ndị North na -alọta. A na -agụ akụkọ ahụ Nwa ojii, onye nlekọta mpaghara ahụ. Ọwụwa Anyanwụ na -eche ọgụ siri ike ihu megide Union - Ndị otu ndịda - ndị chọrọ iweghara ókèala ahụ n'agbanyeghị ego ọ bụla. El violento esemokwu na -apụta n'ime ụbọchị atọ ọbara, nke onye dere ya kọwara n'uju.
Saga Oge ara
Nke a bụ ihe atọ kacha ọhụrụ nke Abercrombie. Na ederede ịlaghachi na mbara igwe anwansị emepụtara na ya Iwu Mbụ, naanị na omume ahụ pụtara afọ iri atọ ka emechara. Akụkọ ụmụ na -anọchite anya akụkọ ihe mere eme akara ngosi ndị odide sitere na akụkọ mbụ. Ọzọkwa, n'atụmatụ ọgbaghara ahụ siri ike na nke obi ọjọọ na -apụta n'etiti North na Union; agbanyeghị, oge a ọgụ a bụ maka mpaghara ndịda.
Obere ịkpọasị (2019)
Mgbe mgbanwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe gasịrị, igwe dochie akụkụ ụfọdụ nke ọrụ aka. Agbanyeghị na nke a enwela ọganihu na Adua, ọtụtụ na -ajụ ya ma na -ekwesị ntụkwasị obi n'ụzọ anwansi ha. N'otu oge ahụ, A na -alụ ọgụ siri ike n'etiti North na Union, mana nwere ebumnuche ndị ọzọ. Enwere ndị ngagharị iwe ọhụrụ, gụnyere: Leo dan Brock, Prince Orso, Stour Ocaso na Savine dan Glokta.
Obere ịkpọasị (Runes)
Nsogbu udo (2020)
N'ime okirikiri ụwa enwere nkwekọrịta udo adịghị ike. Maka akụkụ ya, eze ahụ na -eto eto ga -elebara onye ndu ya anya nke ọma, ebe ọ bụ na onye ọ bụla chọrọ irite uru nke enweghị uche ha. Leo na Stour Ocaso na -echegbu onwe ha ma ghara iweda nche ha, na -atụ anya tupu oge a na -enweghị esemokwu. Ma Savine na Rikke nwere oge dị mkpa na ndụ ha. Ihe odide niile na -aga nnukwu mgbanwe dị mkpa.
Nsogbu nke udo: Ndị ...
Amamihe nke Ìgwè Mmadụ (2021)
Ọ bụ nkeji ikpeazụ nke trilogy Oge ara; Ekwuputara mwepụta Bekee ya na Septemba 2021. Nkọwapụta mbụ gosipụtara dị ka mmalite nke akwụkwọ akụkọ na -arụ ụka mmalite nke nnukwu esemokwu nke na -ebu na mbụ. Ihe odide ya bụ isi nke mgbanwe nke eziokwu ọhụrụ, ebe ihe niile na -ada.
Banyere onye edemede, Joe Abercrombie
Onye edemede Joe Abercrombie mụrụ na Disemba 31, 1974 n'obodo Lancaster, United Kingdom. Nwa okorobịa ahụ gụrụ akwụkwọ na Lancaster Royal Grammar School maka ụmụ nwoke. N'afọ ndị ahụ, ndị Britain e ji mara egwuregwu vidio na inwe nnukwu ihe okike na ichepụta ihe, àgwà ndị o gosipụtara site na eserese na maapụ akụkọ ifo dị mgbagwoju anya.
Mgbe ị gụsịrị akwụkwọ sekọndrị gị, Ọ banyere na mahadum Manchester, ebe ọ gụrụ maka akparamaagwa. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ọ gara London; Ebe ahụ rụrụ ọrụ na mpaghara mmepụta telivishọn. Ahụmahụ a mere ka ọ jiri aka ya mezie ndezi ihe onyonyo. N'oge ahụ, o mere vidiyo vidiyo na Coldplay, The Killers na Barry White, n'etiti ndị ọzọ.
Na 2002, ọ malitere ide akwụkwọ akụkọ efu mbụ ya, nke kwụsịrị afọ abụọ ka e mesịrị. Ọ bụ ihe Olu mma agha. Ọ bụ ezie na ọrụ ahụ adịla njikere maka mmalite ozugbo ọ gwụchara, Abercrombie chere afọ abụọ (2006) maka mbipụta ya nke ụlọ mbipụta Gollanz bipụtara. Site na ederede a, usoro ọmụmụ malitere Iwu Mbụ.
N’oge na -adịghị anya, onye edemede ahụ nwetara nkwanye ugwu dị mkpa, na -erute ebe mbụ ịre ahịa dị ka onye na -egosipụta ụdị echiche efu.
Mgbe Abercrombie gụchara usoro nke mbụ ya, o mepụtara akụkọ anọ nwere onwe ya, nke kwụpụta: Ọbọ kacha mma (2009) na Ala uhie (2012). O bipụtakwala sagas ndị ọzọ dị mkpa: Trilogy of Oké Osimiri (2014-2015) na Oge ara (2019-2021). Nke ikpeazụ na -enye akụkọ na -aga n'ihu na ụwa efu nke saga mbụ.
Ọrụ Joe Abercrombie na -arụ
Saga Iwu mbụ:
Ala uhie (2012)
Oké Osimiri Oké Osimiri:
Ọkara eze (2014)
Ọkara ụwa (2015)
Ọkara agha (2015)
Agụba na -egbu egbu (2016)
Saga Afọ ara:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Akụkọ ndụ » Joe abercrombie
Clara Peñalver kwuru. Ajụjụ ọnụ na onye edemede nke Sublimation